Nyowani paFortnite: Tamba kupfura pasina kuisirwa - mutambo poindi - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Fortnite ikozvino inogona zvakare kutepfenyurwa zvachose pasina muripo uye isisiri kungorimbwa. Mukubatana neEpic Mitambo, iyo yehondo royale shooter ndiyo yekutanga yemahara-yekutamba zita rinowanikwa neXbox Cloud Gaming. Mune ramangwana, vatambi vachakwanisa kuridza zita racho kuburikidza negore pane iOS zvishandiso, Android mafoni kana mahwendefa uye Windows PC kuburikidza nebrowser.
Xbox 'cloud mutambo wekutamba uri kukura - panguva ino ine fide premiere yeimwe yeanonyanya kufarirwa mitambo yemavhidhiyo: Fortnite. Fortnite kuburikidza nemitambo yegore inowanikwa munyika makumi maviri nenhanhatu - unoda Microsoft account uye iOS, iPadOS, mudziyo weAroid kana Windows PC ine internet yekuishandisa.
Fortnite: tamba pasina kuisirwa
Hapana chichachinja kune venguva refu Fortnite vatambi, asi gore mutambo wemitambo une mukana wakakura wakakura: vateveri vanogona kuiridza pasina kuisirwa uye pasina humwe hunhengo paXbox.com/play. Musoro unoshanda neNative Touch Control pamwe chete nevanotsigirwa vatongi. Zvinogoneka zvakare kubhejera pamidziyo yekare - chero kwaunogona kuwana Indaneti.
Cloud mitambo paXbox inogara ichishanduka. Vanhu vanopfuura mamirioni gumi pasi rese vakatamba mitambo kuburikidza neXbox Cloud Gaming (Beta) muXbox Game Pass. Vashandisi ve Cloud Gaming vanogara munyika makumi maviri nenhanhatu uye vanotamba pazvishandiso zvinopfuura zviuru zvitanhatu zvakasiyana - kubva kumidziyo yakasiyana siyana yeAroid uye maPC kusvika kumaPhones ezvizvarwa zvese.
Paavhareji, vashandisi veXbox Game Pass vanowana uye vanotamba kanenge kaviri mazita akawanda ane makore ekutamba sevasiri nhengo dzegore. Izvi zvinogona zvakare kuve imwe mukana weFortnite, nekuti pane mukana wekuvhura mapoka matsva anotangwa. Mushure mezvose, iwe unogona ikozvino kungoyedza iyo Hondo Royale shooter pakati pasina kumirira kurodha uye kuisa. Uye, paavhareji, nhamba yevashandisi vari kutamba mitambo ine touch control yakapetwa kaviri. 20 muzana yevashandisi veXbox Cloud Gaming vanoshandisa kubata zvidhinha chete.
Microsoft ichangobva kuratidza kuti pfungwa iyi inoshanda kumitambo yakakurumbira: mazita ane hunyanzvi hwekuita zvinodikanwa anogona kuridzwa pamapuratifomu akawanda - muna Kurume, iyo Microsoft Flight Simulator ndiyo yainyanya kuridzwa zita regore pane smartphones, mahwendefa, maPC uye consoles. Hardware nzara haizive gore, zvirinani kwete kudivi remutambi.
Kubva pakatangwa Cloud Gaming, Xbox yakabatana nemasitudiyo anopfuura zana nemakumi maviri neshanu uye yakagonesa mitambo inodarika mazana matatu nemakumi mashanu kubva kuXbox Game Pass katalogi - anopfuura zana nemakumi mashanu emazita anotsigira kubata zvinodzora.
Hasbro Gaming E6603398 Fortnite Edition, bhodhi mutambo kune... * 59,88 EUR tenga
Kare Taive Pano Nokusingaperi: Gameplay mune yekutanga turera
Inotevera Blade Runner: Peni nePepa zvinotyora iyo miriyoni mamaki paKickstarter
Muedzo wemutambo weRopa Rage: Digital Edition - Yakabudirira sei kuchinjirwa kwebhodhi mutambo?
Wongororo yeCrazy Driver - Animal Racing Board Game neApp